Wiilal Soomaaliyeed oo lagu dhex dilay dukaamadooda - Caasimada Online
Home Warar Wiilal Soomaaliyeed oo lagu dhex dilay dukaamadooda
Wiilal Soomaaliyeed oo lagu dhex dilay dukaamadooda
Cape Town (Caasimada Online) – Kooxo burcad hubeysan ayaa habeenimadii Sabtida ee xalay waxay laba wiil oo Soomaaliyeed ku dileen dukaamadooda oo ku yaal tuulada la yiraahdo Strand kana tirsan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Africa.
Dhalinyarada la dilay ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Cabdirashiid Axmed Sheekh Muxuddiin iyo Mowliid Axmed Cadde, waxaana jira dhaawaca sedax wiil kale oo ku kala sugnaa laba dukaan oo iska soo horjeeday.
Burcada ayaa gashay labada dukaan, kadibna waxay rasaas ku fureen dhalinyaradii ku sugnaa labada dukaan, waxayna burcadda dhac iyo dil isugu dareen dhalinyaradaasi Soomaaliyeed.
Markii falkaasi dhimashada iyo dhaawaca geystay ayaa goobta isaga cararay. Booliska iyo dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed ayaa goobta gurmad ahaan u tegay.
Booliska uma suuragelin inay gacanta kusoo dhigaan burcaddaasi, hase ahaatee waxay mas’uuliyiinta jaaliyada Soomaaliyeed ee Cape Town ay u sheegeen inay baarayaan isla markaana gacanta kusoo dhigi doonaan kuwii ka danbeeyay gumaadka dhalinyaradaas.
Dalka Koonfur Africa ayaa si joogto ah burcada ku bartilmaameedsadaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka xoogsata magaalooyinka kala duwan ee Koonfur Africa. waxayna dhibane u yihiin Soomaalida burcad hantidooda ku haysta iyo inay damiyaan hhorumarka Soomaalida ay ka gaaraan ganacsi walba oo ay u dhaqaaqaan.